Igqwesileyo kwiintsapho, iimbono zolwandle kunye ne-Es Vedra
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJ. Hypatia
UJ. Hypatia unezimvo eziyi-345 zezinye iindawo.
Indlu enomtsalane oqhelekileyo kunye nemibono yolwandle emangalisayo kuphela yimizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka elunxwemeni lweCala Codolar kunye ne-1,2 km ukusuka eCala Conta, ekumgca wokuqala ukuya elwandle.
Ukususela nge-3 kaJuni ukuya kwi-15 kaSeptemba, kuphela iiveki ezipheleleyo ukusuka ngoMgqibelo ukuya ngoMgqibelo.
IMALI EYONGEZIWEYO YE-100€ ISEBENZA KWIINTSUKU ezi-5 zokubhukisha
Yindlu ephangaleleyo enokukhanya okuninzi kwaye ihonjiswe kamnandi. Kukho amagumbi okulala ama-3, enye inebhedi ephindwe kabini, enye inebhedi enye enye enebhedi enkulu, kunye namagumbi okuhlambela amathathu, enye kwigumbi ngalinye lokulala.
Ikhitshi inombono wolwandle, ivulekile kwaye ifumana ukukhanya okukhulu. Ixhotyiswe ngefriji enkulu kunye nesikhenkcezisi, isitovu sokungenisa izinto, i-oveni yombane, isitya esipheleleyo, neembiza neepani ezininzi. Kufuphi nekhitshi yindawo yokuhlala kunye negumbi lokutyela, kunye kwigumbi elinye. Indawo yokutyela inetafile yabantu abayi-6, kwaye igumbi lokuhlala linesofa enkulu kunye neTV. Eli gumbi linokufikelela kwi-pool terrace ngeeglasi ezinkulu.
I-terrace yangaphandle inkulu kakhulu kwaye ijikeleze indlu yonke. Ngaphambi kwendlu kunye nombono wolwandle, kukho ichibi, iisofa kunye nezitulo zangaphandle. Kukho indawo egqunyiweyo yelitye elimhlophe kwaye yonke i-terrace ifakwe iithayile. Kwelinye icala kukho ibarbecue negumbi lokuhlamba impahla, kwelinye icala kukho itafile eyenziwe ngomthi elungele abantu abali-10. Zintathu iiawnings zombane ezinokuthi zigqume umphambili, icala kunye nethayile engasemva ukwenzela umthunzi othile. Umnyango wendlu unesango elikhulu lokungena, kwaye iimoto zinokumisa ngaphandle esitratweni, phambi kwendlu. Onke amagumbi anesimo somoya, kwaye kwigumbi lokuhlala kukho fan enkulu yesilingi. Kukho izitepsi eziya phezulu eluphahleni, azifakwanga kodwa zikulungele ukuhlala phantsi kwaye wonwabele umbono wepanoramic okanye ukonwabele i-yoga kusasa. Ngenxa yezizathu zokhuseleko lwabantwana kukho umnyango kwi-staircase omele uhlale uvaliwe. Idama lisenokubiyelwa ngezizathu zokhuseleko. Ukusuka endlwini ngemizuzu emi-5 uhamba ufikelela kunxweme oluncinci olubizwa ngokuba yiPlaya Codolar. ICala Conta, enye yeelwandle ezintle kakhulu ezinamanzi ekristale kunye nokutshona kwelanga okumangalisayo kukuhamba ngemizuzu emi-3 kuphela.
4.67 · Izimvo eziyi-9
Umbuki zindwendwe ngu- J. Hypatia
Ujoyine nge- 2013 Februwari
Siya kuba mfana ukunceda iindwendwe zethu nangaliphi na ixesha
Inombolo yomthetho: ETV-2353-E
Iilwimi: English, Deutsch, Español
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$792